Samsung FRP Lock Bypass ( No need Otg , No need Box )
Samsung Frp Lock Bypass No need Otg , No need Box SideSync Method ! All Simple Step ၊ Written by Me !
ဒီတစ်ခေါက်ပြောမှာကတော့ ရိုးရိုးဖုန်း ချာဂျင် ကြိုး ကို hack ပြီး အားအမြန်ဝင်အောင်လုပ်တဲ့နည်းပါ၊
ဟုက် လွယ်ပါတယ် အရမ်းလွယ်တယ် ၊ ကွန်ပျူတာမလိုဘူး အင်တာနက်မလိုဘူး
ဖြတ်ပြီးရင် ဒါမျိုး အစလေး ရအောင်လှီးထုတ်လိုက်နောက် သတိတော့ထားပါ ဓားရှတက်တယ်ဗျ ၊
ပြီးရင် အဲ့အစ နှစ်ခုကို ပူးပြီး လိမ်ပေးလိုက်ပါမယ် ၊ အောက်က ပုံထဲမှာလိုမျိုး
Ubuntu မှာ ဖိုင်တွေ sharing လုပ်ဖို့Samba Gui ကို သွင်းပြီး ဖွင့်တဲ့အခါမှာ password ထည့်ပြီး Ok နှိပ်လိုက်ရင် ပြန်ပိတ်သွားတဲ့ပြသနာကို ဖြေရှင်းနည်းပါ၊
password တောင်းရင် ထည့် (အန်းတားခေါက်)
ဒါဆိုရင် gedit နဲ့ ပွင့်လာပါမယ် ဘာမှမရေးထည့်ပဲ save လုပ်လိုက်ပါ၊ ဒါဆို blank ဖိုင်တစ်ခု ဖန်တီးပြီးပါပြီ၊ အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ samba gui ကိုဖွင့်လို့ ရပါပြီ။ အိုကေ :)
Download Myanmar Hacker Story Android Apk offline reader of
Myanmar Hacker News & Tutorial Download Here
မိုဘိုင်း forensic သမားတွေအတွက် အလွန်တစ်ရာ ကောင်းမွန်တဲ့OS တစ်ခုပါ၊ သူ့ မှာပါတဲ့ Tools တွေကတော့
Android SDK ManagerAXMLPrinter2FastbootHeimdall (src | howto)Heimdall (GUI) (src | howto)SBF FlashPenetration Testing:
Burp SuiteEttercapMercurynmapOWASP ZAPSSL Stripw3af (Console)w3af (GUI)Zenmap (As Root) Wireless Analyzers:
ChaosreaderdnschefDSniffTCPDUMPWiresharkWireshark (As Root)Device Forensics:
AFLogical Open Source Edition (src | howto)Android Brute Force Encryption (src | howto)ExifTooliPhone Backup Analyzer (GUI) (src | howto)libimobiledevice (src | howto)scalpelSleuth Kit Reverse Engineering:
AndroguardAntilvlAPK ToolBaksmaliDex2JarJasminJD-GUIMercuryRadare2Smali စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် ၊ Penetrater တစ်ယောက်မဟုတ်ခဲ့ရင်တောင်မှ မိုဘိုင်း ဆော့ဝဲလ် သမားတွေအတွက်ပါ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ OS တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၊ ။ 64-bit OS
Via forensics thotcon-2013-mobile-security-with-santoku-linux from NowSecure
Download Myanmar Hacker Story Android Apk offline re…
Android Phone တစ်လုံးကနေ ၀ိုင်ဖိုင် hotspot တစ်ခုလွှင့်ပြီး ၀င်ရောက်အသုံးပြုနေတဲ့ user တွေရဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကို ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ ကြားဖြတ်ခိုးယူတယ် ၀င်ရောက်အသုံးပြုနေတဲ့ user ရဲ့password တွေကို ဘယ်လိုခိုးယူလို့ ရတယ် ဘယ်လိုကြားဖြတ်ယူလို့ ရတယ်ဆိုတာကို beginer တွေနားလည်အောင် သေချာလေးရှင်းပြပေးထားပါတယ်၊ Educational Purpose Only ပါ၊ ဗဟုသုတအတွက်နဲ့ကာကွယ်သတိရှိရန်အတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါတယ်၊ ဖြစ်ပေါ်လာသောနောက်ဆက်တွဲများကို တာဝန်မယူပါ၊
zAndroid Apk Download
Myanmar Hacker News & Tutorial
သုံးရမယ့် command က
| | | _______output file (eg. file.iso)
| |_______ input file (eg. file.uif))
ဒါဆိုရင် .uif ဖိုင်ရှိတဲ့ဖိုဒါထဲမှာ iso format နဲ့ နောက်တစ်ဖိုင်ထပ်ရောက်နေပါလိမ့်မယ်…